आजबाट खुल्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथील्लो तामाकोशीको सेयर, यसरी भर्न सकिन्छ अनलाइनबाटै !
काठमाडौं माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावरको आइपीओ खुला भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरमा १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता आइपीओ खुला गरेको हो । यो आइपीओमा न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कात्तिक १९ गतेसम्म भर्ने म्याद राखिएको छ । यस अवधिमा आवश्यक मात्रामा आवेदन नपरेमा भने मंसिर १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ ।
बिक्री प्रबन्धकको काम नागरिक लगानी कोष र सनराइज क्यापिटलले गर्ने भएका छन् । धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । मेरो सेयर प्रयोगकर्ताले अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन मिल्नेछ ।
यसअघि माथिल्लो तामाकोशीले साउन १६ गतेदेखि भदौ २१ गतेसम्म दोलखाका स्थानीयबासीका लागि चुक्ता पुँजीको १०% (१ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता) आइपीओ निष्काशन गरिसकेको छ । यो सेयर बुधबार बाँडफाँट समेत भइसकेको छ । स्थानीय बासिन्दाको आइपीओ पनि खुलेको ८ दिनमै ओभरसब्सक्राइब भएको थियो ।
आयोजनाको लागत दोब्बर बढ्यो
दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका १ लामाबगरमा निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाको अनुमानित लागत भने दोब्बर पुग्ने भएको छ । यस आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन पनि एक वर्ष पछि सरेको छ । अब माथिल्लो तामोकाशी जलविद्युत आयोजनाले आगामी वर्षको कात्तिक महिनाबाट मात्र व्यावसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन गर्नेछ ।असारबाट परीक्षणका रुपमा र कात्तिकबाट व्यवासायिक रुपमै उत्पादन हुने आयोजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए । आयोजनाले यसअघि आगामी पुसबाट उत्पादन गर्ने सुरु गर्ने भने पनि भूकम्प र नाकाबन्दीको असरका कारण निर्धारित समयमा गर्न नसकिएको उनले बताए । आयोजना सुरु गर्दा ३५ अर्ब हाराहारीमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अब ७० अर्ब जति लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुले नै लागत उच्च रुपमा वृद्धि भएको हो ।
लगानीकर्ता तत्काल भने नोक्सानमै
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार लगानीकर्तालाई तत्काल २ रुपैयाँ ४६ पैसा घाटा हुने देखिन्छ । आइपीओ निष्कासन गर्न सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणका अनुसार प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले आइपीओ लगानी गर्नेको सेयर मूल्य ९७ रुपैयाँ ५४ पैसामा झरेको छ ।चालु आवको अन्त्यसम्ममा प्रतिसेयर नेटवर्थ ७८ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम हुने कम्पनीको प्रक्षेपण छ । आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा प्रतिसेयर ३८ रुपैयाँ आम्दानी हुने पनि कम्पनीको भनाई छ । तर दोस्रो बजारमा सूचीकरण हुँदा कायम हुने भाउबाट भने लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
आयोजनाले २०७४ फागुनमा ३ करोड ६० लाख ६ हजार कित्ता सेयर बिमा संस्थानका कर्मचारी, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी, नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीका लागि यसअघि नै निष्काशन गरिसकेको छ ।
Posted in अर्थ /विकास, मुख्य समाचार, राजनीति
१५ कार्तिक २०७५, बिहीबार ११:५६ 01/11/2018 by महेश शर्मा
पद्मरत्न तुलाधर: राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यदेखि बरिष्ठ बामपन्थी नेतासम्म !
धरानबाट २१ बर्षीय जया कार्की भन्छिन १४ बर्ष देखि अहिले सम्म १० जना भन्दा बढी संग सेक्स गरे… (भिडियो सहित)!
घर लगियो तुलाधरको शब, पछि पछि लागे प्रचण्ड पनि (तस्बिर सहित)!